Faka indlu yangasese, okuyinto has egcekeni lalo, kunzima kakhulu kunalokho ukuba zinakekele indlu. Kubalulekile ukuthi endaweni kwakungeyona nje yonke into ihlanzekile, kodwa futhi enhle, ehlotshiswe kahle, ukuze ngendlu futhi igceke baye Bahlala ngokuvumelana. Umklamo egcekeni indlu yangasese siqukethe ingaphandle lendlu, kusukela izitshalo ukuthi bahlezi flowerbeds kanye izingadi, kanye add-on ngesimo izindlela, ezicijile nezinye izesekeli. Ukuze wenze konke ngifane Ensemble olulodwa, Asizisoli sonke sicabange futhi kuphela bese uqhubekela phambili muhle isayithi nokutshala.
Ngakho, okwenza ukuthi ukuklanywa egcekeni lomuzi yangasese, kuqala okwesikhashana Dweba insimu umugqa. Nquma lapho yokupaka uzobe elise, Gazebo, lapho izihlahla zezithelo zikhule futhi lapho liyothi cababa ornamentals. Futhi ukumaka indawo ithala, eyakhelene endlini. Kuyinto kuso, uzokwazi ukujabulela kusihlwa ehlobo nentshonalanga bese ukuphefumula umoya ohlanzekile. Futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe ufuna ukubona kusayithi lakho izinkantolo tennis, ezivulekile yezinyoni for izinja, sauna noma igumbi umusi, inkundla yokudlala? Ukuba khona esishintshashintshayo enjalo luncike umndeni wakho ku-esikuthandayo.
Poaniruya ukuklama egcekeni lendlu yangasese, Dweba ngokucophelela ngokuya ithrekhi izifunda, okuzoba kwigayidi yakho engadini, ukuze imibhede, egalaji kanye nezinye izikhungo. Yard of egandayiwe kungenziwa kwavula emabhuloki itshe noma ama-tile, noma primer kungenziwa nihlwanyelwe utshani Turf. Esimweni sokuqala, kuvulandi zakho bayokuhlola Lihle njalo, it libhekene okukhulu futhi conservatism. Uma wenza kanjalo cishe yonke indawo otshanini mbewu, uthola oasis emangalisayo enhle lapho uyohlale mnandi ukuba ukuphumula.
Njengoba kushiwo ngenhla, ukuklanywa egcekeni indlu yangasese ayikwazi wacabanga ngaphandle izitshalo, phakathi lapho kukhona izinhlobonhlobo Ornamental nemithi yezithelo. Uma ungumnikazi endaweni encane, akufanele basenze sonke engadini. Ingabe umhlaba eduze kocingo izihlahla bazokwazi ukufeza ukukhula ehloniphekile iminyaka eminingi, kaka them ne izimbali zasendle (cornflowers, bluebells, yefilakisi) noma ukuhlwanyela ingadi negceke utshani. Eduze kwethu, ungafaka i-zezimbali. Catching ukutshala izimbali, cabanga kwawo, umbala, isayizi imbali. Kubalulekile ukuthi izitshalo ayevumelana nomunye, isibonelo, kwenye imbali embhedeni uyobheka kahle ophuzi kanye iris okwesibhakabhaka, futhi ezinye kungenziwa ehlotshiswe nemofiloy okwesibhakabhaka, crocuses Lilac kanye iminduze emhlophe.
Dala engadini langa egcekeni lendlu yangasese kungenzeka esebenzisa echibini yokufakelwa. Yakha umthombo encane egcekeni, noma uhlele khona egqumeni alpine. Amanzi kungenziwa itshalwe iminduze amanzi iminduze, okuzoba ube esefika esiphethweni esinengqondo umqondo. Khumbula ukuqapha ubumsulwa yamanzi echibini yakho.
Uma uya ngale ndaba ingqondo umcabango, kuvela ukuthi kuba lula kakhulu ukudala i design yokuqala sangasese endlini egcekeni. Izithombe izixazululo ahlukahlukene evezwa ephepheni. Ngokusekelwe kulezi idatha, ungakwazi ukuthuthukisa design esiyingqayizivele sizoqukatha wonke izinto zakho ozithandayo.
AmaConifers nezinhlobo zabo
Edelweiss - imbali ezinkangala
Zantedeschia: ukunakekelwa ekhaya, incazelo kanye nezincomo
Blue Rose: kusukela ekuqaleni kuze kube manje
Alinikela izinkambo e Dubai?
Uyini usuku loSuku Lwaziswa Lomhlaba?
Plasterboard ophahleni ekamelweni: tesakhiwo
Ukwenza izicupho ngezandla
Likuphi Tarko-Yamadivayisi? City Tarko-Yamadivayisi, lePhure yesigodi kuleli Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia